Taliyaha Booliska oo faahfaahiyay Khasaaraha Qaraxyo ka dhacay Muqdisho. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Taliyaha Booliska oo faahfaahiyay Khasaaraha Qaraxyo ka dhacay Muqdisho.
Taliyaha Booliska oo faahfaahiyay Khasaaraha Qaraxyo ka dhacay Muqdisho.
written by Ateera 15/06/2019
Qaraxyo maataano ah ayaa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho, waxaana Qaraxyaddaan ay kala dambeeyeen Daqiiqo kooban.
Qaraxa Koowaad ayaa ka dhacay Isgoyska Sayidka goob ay ku sugan yihiin Ciidanka Ilaaladda Madaxtooyadda Soomaaliya, islamarkaana laga ilaaliyo Golaha Shacabka, waxaana Qaraxaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa.
Goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa ah meel inta badan Mashquul ah oo ay isticmaalaan Mas’uuliyadda dowladda Soomaaliya, waxaana sidoo kale halkaasi ku yaalla Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga iyo Xarunta Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Qaraxa Labaad ayaa ka dhacay agagaarka KM4 , waxaana loo adeegsaday gaari noociisa yahay Toyota NOHA oo qalin ah, ciidamada amniga ayaa ku guleeystay in ay gacanta ku soo dhigaan wadihii gaarigaas wax qasaarana ma uusan geysan qaraxaas.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 9 ruux ay ku dhinteen Qaraxyadda sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhaawaad 25 ruux.
Taliyaha Booliska oo faahfaahiyay Khasaaraha Qaraxyo ka dhacay Muqdisho. was last modified: June 15th, 2019 by Ateera
Madaxweyne Xaaf oo ka hadlay dadkii lagu laayay Gaalkacyo.
Daawo GUDIGA DOORASHADA KGS OO WAR MURTIYEED SOO SAAREY QAABKII DOORASHADA UDHICI LEHEED
Dhageyso: Gudoomiye Cabdirisaaq Saajin Oo Kahadlay Meelaha Ay Marayaan Dib U Haweynta Waddooyinka Degmada Xudur.
Ilhaan Cumar oo aabaheeda Geeryooday iyo Taariikh nololeedkiisa
Madaxweynaha Puntland Oo Gaaray Magaalada Baydhabo iyo Akhriso Ujeedka Safarkiisa
Kuuriyada Waqooyi oo shaacisay inay u diyaar garowday dagaal iyadoo tayayneysa Nukliyeerkeeda
Maamulka Koofur Galbeed oo soo saaray amaro la xiriira Ciida Carafo.
Dhageyso wareysi af hayeenka GG, Malaaq Deeraw oo ka warbixiyey geeri naxdinlex ay ku timid Malaaq cali Bare.
VIDEO:-GUDDOOMIYAHA BAARLAMAANKA JABUUTI OO KHUDBAD U JEEDIYAY XILDHIBAANADA GOLAHA SHACABKA